Umdlalo wokusinda, umdlalo kaXiaomi ukujongana nePUBG kunye neFortnite | I-Androidsis
UAron Rivas | | Fortnite, Imidlalo ye-Android, Izaziso, Xiaomi
Imidlalo ye-Battle Royale ithathe ii-smartphones ngoqhwithela kunyaka ophelileyo. Imidlalo efana nePUBG - efumene uhlaziyo olutsha lweHalloween-Y Fornite Bafumene ukuthandwa okukhulu phakathi kwabasebenzisi abaselfowuni kwaye ibingumbandela wexesha ngaphambi kokuba abanye abavelisi, abanjengoXiaomi, bagqibe kwelokuba bangcolise izandla zabo kule marike. Ngeli xesha, sifumana umdlalo omtsha wedabi ovela kwinkampani yaseTshayina, kwaye ibizwa Umdlalo wokuSinda.
Inkampani kutshanje yenza isibhengezo kwiiforamu zayo kwaye yaqala nokuthatha ii -apps ze-beta yayo evaliweyo. Uluvo lufana kakhulu nemidlalo ethandwayo, njengaleyo sele ikhankanyiwe. Siyakwandisa!
Umdlalo wokusinda uqala ngabadlali abaninzi abakhuphisanayo. Umdlali wokugqibela omileyo uphumelele. Umdlalo unezinto ezininzi ze-sci-fi ukukholisa umsebenzisi. ungumdlali yintoni ekuwe kunye neempawu ezinje ngokukwazi ukubhabha kumlinganiswa ngamnye, oya kuthi ngokuqinisekileyo enze umdlalo ubenomdla. UXiaomi uwuchaze umdlalo ngolu hlobo lulandelayo:
Umdlalo ngamnye uqala ngabadlali ababhabha besuka emajukujukwini baye kwindawo yemephu. Abadlali banokuthatha isigqibo sokuba bangaya nini kwaye beza phi kumhlaba wokulwa. Zonke izixhobo zifunwa kwaye ziyafunyanwa kwimephu, kwaye abadlali bangalwa nabakhuphisana nabo nangaliphi na ixesha. Ukuma kokugqibela kuya kuba yimpumelelo!
Kuyatshiwo ukuba umdlalo omtsha kaXiaomi wedabi ilungiselelwe kumanqanaba amaninzi. Oku mhlawumbi kuthetha ukuba umdlalo uyavavanywa kwii-smartphones ezahlukeneyo kwimarike yanamhlanje ukuqinisekisa umdlalo weqonga ogudileyo. bugs naluphi na uhlobo. Nangona kunjalo, inkampani kusafuneka ichaze inkxaso kwiseti ethile yezixhobo. Ukusukela ngoku singena kwisigaba se-beta esivaliweyo, kufuneka silinde ubuncinci iiveki ezimbalwa ukufumana okungakumbi malunga nokumiliselwa kurhwebo kufutshane.
Isithuba seforum siza nomboniso wokuqala womdlalo. Kunzima ukutsho ukuba uMdlalo wokuSinda unokukhuphisana nezithuba ezinje ngePUBG okanye neFortnite, Kodwa kuba ivela kuhlobo olufana neXiaomi, silindele ezinye izinto ezinomdla kunye nokukhetha umdlalo. UXiaomi wayesamkela izicelo zovavanyo lwe-beta oluvaliweyo, kodwa elo xesha libonakala ngathi liphelile. Ifomu kaGoogle ebonelelweyo iyekile ukwamkela iimpendulo, oko kuthetha ukuba bafikelele kwinani elaneleyo lezicelo ngaphambi komhla wokugqibela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Umdlalo wokusinda, umdlalo omtsha kaXiaomi kwisitayile sePUBG Mobile kunye neFortnite
Shining Force, ukubuya kweklasikhi kunye nokuba ungayenzi njani
Uyongeza njani iakhawunti entsha kaGoogle Chrome ye-Android